We She Me: The Weakest Link
| FLAGS: Me , Theory
sin dan lar - 12/1/08, 2:20 PM
လူ၁ ယောက်ဟာ လောကကြီးမှာ အသုံးဝင်တဲ့နေရာရှိဦးမှာပါလို့..
အဲဒီနေရာကို သိဖို့။ ရှာတွေ့ဖို့ပဲလိုတယ်။
ကိုအန်ဒီပြောချင်တာ ၁ ခု၊ သဘောပေါက်သွားတာက
၁ မျိုးဆိုရင်လည်း သည်းခံပါ။
Basic နည်းလို့ပါ။( မခင်ဦးမေလေသံဖြင့်)
Anonymous - 12/1/08, 5:41 PM
Like many of your previous posts, this also gives me food for thought.
The weakest in one area can be the strongest in another. The point is to know ourselves and to realize our potential.
I believe you will keep up blogging despite your career and family duties. I don't wanna ask for quantity. But pls keep giving us quality posts like this.
Taungoo - 12/1/08, 6:12 PM
weakest link တစ်ယောက်ကို ဗုံတီးတဲ့နေရာမှာ ထားလိုက်တာ.... ဟားးးးး
ကိုအန်ဒီထောက်ပြတဲ့ ပစ်မှတ်က ကွက်တိပဲ။
May Moe - 12/1/08, 7:29 PM
ဗုံတီးနေတဲ့ အကိုAndy ပုံကိုမြင်ယောင်ပြီး ဖတ်သွားပါတယ် :D
ဲမြစ်ချေသူ - 12/1/08, 8:12 PM
The Weakest Link Post ကိုဖတ်ပြီး တွေးစရာတွေများလာတယ်။
တစ်ခုသွားသတိရမိတယ် ဆိုင်မဆိုင်တော့မသိဘူး ကိုအန်ဒီရေ
စီပွားရေးလုပ်နေတဲ့ ကျမအစ်ကိုတစ်ယောက်က ပြောတယ်” ငါ့မိန်းမ ရှေ့ ထားလဲမရ နောက်ထားလဲမရ ဘယ်နေရမှ အသုံးမ၀င်ဘူးဟာ” လို့ကျမလဲပြန်ပြောလိုက်တယ် အစ်ကို တို့ ကလေးယူပြီး မိန်းမကို ကလေးမွေးခိုင်းလိုက်လို့ ...
အဲသလိုမျိုး အသုံးဝင်မဲ့တစ်နေရာတော့ရှိကြပါတယ်လို။ :p
khin oo may - 12/1/08, 10:45 PM
ဘာဖြစ်လို့ လည်း လို့မမေးနဲ့်။
JulyDream - 12/2/08, 6:57 PM
အင်း လှေဦးမှာပဲ ဗုံတီးတော့မယ်။ ဗုံတီးတတ်အောင်တော့ ကျင့်ထားအုံးမှ။
မီယာ - 12/3/08, 7:03 AM
တက်တူ - 12/7/08, 2:59 AM
ကျွန်တော်တို့ အလုပ် nature ကိုက group နဲ့လုပ်ရတာဆိုတော့ ပိုနားလည်ဖို့လိုတယ်...
Moe Cho Thinn - 12/8/08, 4:45 AM
ဒါကြောင့် လူရယ်လို့ ဖြစ်လာပြီဆိုရင် လူညွန့်မတုံးဘူး တဲ့၊ သူအားသာချက် တခုခု တော့ ရှိတာပါ။ ဒါပေမဲ့ သူ့နေရာနဲ့သူ နေဖို့ ထားတတ်ဖို့လဲ လိုသေးတာ။ အခု ကိုAndy ရဲ့အဖွဲ့က လှေထိုးတဲ့နေရာမှ အသုံးမ၀င်တာကိုလဲ သိတယ်၊ ကိုအန်ဒီ ကိုယ်တိုင်ကလဲ ကျေကျေနပ်နပ် လက်ခံပြီး သင့်တော်ရာမှာ နေပေးတယ်လေ။ အဖွင့်အပိတ် အပေးအယူမျှတယ်ပေါ့။
တချို့ကျတော့လဲ မသင့်တော်ပါဘူးဆိုလဲ လှေပတ်ချာလှည့်အောင် လှော်နေသေးတာ ရှိတတ်တယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို မသိဘူးပေါ့။ ပြောမဲ့သာ ပြောတာပါလေ။ အမဆိုလဲ လှေပေါ်တောင် တက်ခွင့်ရပါ့မလားမသိ။ ဗုံတီးဖို့ နေနေသာသာ။
Anonymous - 1/2/09, 6:08 PM
ဖတ်ဖြစ်တာ မကြာသေးပေမယ့် Reader နဲ့ ၀င်ဖတ်ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်က မိသားစုထဲမှာ အဲဒီ Weakest Link ဘ၀မှာ အတော်ကြာကြာ ရှိခဲ့တာ (အခုလည်း လွတ်အောင် မနည်း ကြိုးစားတုန်း) ဆိုတော့ ဒီ post လေးဟာ ကျွန်မအတွက် အားဆေးတစ်ခွက်လို့ ပြောရင်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်။
Andy Myint - 1/5/09, 3:21 PM
ဟားဟား မခင်ဦးမေ လေသံဆိုတာကို သဘောကျသွားပြီး မစင်းဒန်လာ။ ကြိုက်တဲ့ အယူသာယူဗျာ.. ကျွန်တော်ကလည်း ရေးချင်တာ ရေးထားတာ
ဒီလိုပဲ ကိုယ်တွေ့ရေးလိုက်တာပါ တောင်ငူသား
ဟားဟား ကျွန်တော် ဗုံတီးနေတဲ့ပုံက ကိုယ်ဘာကိုယ် ပြန်မြင်ယောင်ရင်တောင် အတော် ရယ်စာရာကောင်းတာ ညီမ မေမိုး
အင်းကလေးမွေးရင်တော့ မိန်းမတွေက အတော့်ကို အလုပ်ရှုပ်သွားတာပဲမမြစ်ချေသူ
မမေးတော့ပါဘူး မခင်ဦးမေရဲ့ လျှို့ဝှက်အပြုံးတွေကို
ဟုတ်တယ်နော် စည်းချက်မှန်အောင် ဗုံတီးဖို့လည်း မလွယ်ဘူး JulyDream
စားစာရာတွေ ခေါ်ပြီး ပြန်သွားတယ်လား မမီယာ
တန်ဖိုးရှိတဲ့ အတွေးအခေါ် ရသွားတာ ဖတ်တဲ့သူက ပါရမီ ရှိလို့ပါ ကိုတက်တူ
မှန်တယ် မချိုသင်း ကိုယ်နဲ့ သင့်တော်တဲ့ နေရာပေးတာကိုလည်း ကျေကျေနပ်နပ် ခံယူဦးမှာနော့်
လူတိုင်းက (အနည်းဆုံးတော့ မိသားစုထဲမှာ) Weakest Link တစ်ခါ ဖြစ်ဖူးတာပဲလေ uranusaquarian (ဒါနဲ့ ဘယ်လို အသံထွက်သလဲ ခင်ဗျာ)
ချစ်ကြည်အေး - 6/24/10, 9:38 PM
ဒီပိုစ့်ကို ခုမှ လာဖတ်မိတယ် ကိုအန်ဒီရေ... သဘောကျတယ်...ကိုယ်တိုင် ဖြစ်ခဲ့ဘူးမှာ သေချာတယ်...:)